China New Technology Okpukpo Vitamin C ịsa FIlter Manufacturer na Supplier | Xinpaez
6 AROMA isi - Nyere gị aka zuru ike gị ike gwụrụ na ike mesiri uche
Akpụkpọ anụ & Hair mma - na-eme ka moisturization dị mma, na-agbake, na-acha ọcha, na-agbanwekwa akpụkpọ ahụ
Akwa VITAMIN C - Mkpụrụ vitamin sitere na gel jel ga - ewepu 99.9% chlorine fọdụrụnụ ma nwee mmetụta antioxidation wee nye vitamin na akpụkpọ gị
Irè nzacha - Ọ na-ewepu nchara na ihe ndị na-emerụ ahụ site na mmiri pọmpụ nke ọma
Akụkụ: 133 * 46 MM
MOQ: 50 Ibe
Shei ihe: Polycarbonate (PC)
Njirimara: Okpukpo Vitamin C
"Piel Mkpụrụ" Shell
Ekwu okwu banyere Iyo Shell Ihe, Atụnyere PC na ABS, PC bụ ihe kasị mma mmetụta na-eguzogide plastic. PC bụ injinịa plastik nwere ọnụ ahịa dị elu, mana PC nwere ezigbo ihe mkpuchi ọkụ eletriki yana akụrụngwa akụrụngwa, ọkachasị mmetụta na-eguzogide, ike siri ike, ọtụtụ ọnọdụ okpomọkụ na-arụ ọrụ (-100 ～ 130 ℃) na nghọta dị elu (nke a maara dị ka "Transparent metal"), anaghị egbu egbu, dị mfe ịhazi na ọdịdị. Ọ nwere ike ọ bụghị naanị dochie ụfọdụ ọla, kamakwa iko, osisi, wdg PC anaghị eguzogide hydrolysis, PC okpomọkụ na-eguzogide bụ banyere 130, ABS okpomọkụ na-eguzogide 80 degrees, n'ozuzu arụmọrụ nke PC ka mma.
Whiten gị akpụkpọ ...
A na-eji vitamin C mee ihe na mmiri ịsa ahụ, n'ihi na ọ nwere ike iguzogide ụzarị ultraviolet ruo n'ókè ụfọdụ, melite ọnọdụ nke ntụpọ gbara ọchịchịrị na ntụpọ, n'ihi ya, ọ nwere mmetụta na-acha ọcha. Ngwa nlekọta anụ ahụ bara ọgaranya na vitamin C nwere ike inyere akpụkpọ aka iguzogide ụzarị ọkụ ultraviolet n'oge ọkọchị, na-akwalite metabolism nke anụ ahụ, ma zere ntụpọ gbara ọchịchịrị na agba ntụ. N'oge oyi, ọ nwere ike melite dullness nke mgbasa ọbara na-adịghị mma na akpụkpọ ahụ, nke mere na ị nwekwara ike ịcha ọcha ma na-egbuke egbuke n'oge oyi.
Mgbe ị sachara mmiri na nza a, ihu gị na-amị amị ma akpụkpọ ahụ gị na-enwe mmetụta. Mmiri akpụkpọ ahụ ga-abawanye nke ukwuu mgbe ejiri ya.
1.Nwere nnukwu vitamin C, 45000mg ， nke bụ oge 800 nke lemons. Ozugbo mmiri batara, ọ ga - enye oke omume C. O doro anya na iwepu chlorine.
Mmetụta 2.Moisturizing na-enye gị akpụkpọ ahụ dị nro, dị nwayọọ na mmiri.
3. Belata nchekasị na ike ọgwụgwụ.
Chlorine wepụ dị mkpa
A na-ebuputapụta chlorine fọdụrụ na mmiri pọmpụ n’ikuku n’oge ịsa ahụ wee nọrọ na ime ụlọ ịwụ ahụ ikuku. Sa ahụ ruo minit iri dị ka ị drinkingụ mmiri 1L. Nke bụ eziokwu bụ na ọnụọgụ chlorine na-ekupụ site n'ikuku n'oge bat ahụ karịrị nke ị theụ mmanya.
Kedu ka Vitamin C si arụ ọrụ?
Ọ bụ Neutralization usoro. Vitamin C bụ kemịkalụ na reducibility yabụ enwere ike ịpụ na chlorine. Vitamin C nwere ike belata Cl2 ka Cl -, nke na-eme ka ọ banye na vitamin C site na ya onwe ya. A ghaghị ime mmeghachi omume a na mmiri, na nsonaazụ ahụ adịghị mma na steeti siri ike.
Enwere ike dochie isi nyo n'ime shei ahụ. Mgbe ejirila ihe nhicha ahụ mee ihe, naanị anyị ga-eji dochie isi nyo. N’ụzọ ụfọdụ, anyị nwere ike ichekwa nnukwu ego na ume. Ugboro ole ka anyị kwesịrị iji dochie ya? Ọfọn, ọ dabere. N'ikwu okwu n'ozuzu, otu ihe nzacha nwere ike inye nsacha nke mmiri 6000L, nke enwere ike iji ezinụlọ nke mmadụ ise saa ahụ ihe dịka otu ọnwa.
Ihe Nlereanya a bụ isi nri anyị mepụtara na ụlọ ọrụ anyị. Anyị nwere akara mana anyị etinyeghị ya. N'ihi na anyị na-enye OEM na nke a, gụnyere nsụgharị zuru ezu. Anyị na-egosi a prototype, na ike nke ohere na-ekpe ka echiche gị, Akara, nyo mmewere na shei, ihe niile bụ customizable. Ọ bụrụ n'inweghị echiche, anyị nwere ndị otu anyị nwere iji dụọ gị ọdụ, n'ezie anyị nwekwara ngwaahịa nwekwara, biko nye iwu ma ọ bụrụ na-amasị gị. Ugbu a anyị nwetara asambodo MSDS na SGS na ihe nlere a na-egosi n'okpuru. Daalụ maka ndidi gị ， ka ị rutere ebe a. ^^
Rose, Lavender, Lemọn, Mint,
Nke gara aga: Okomoko Carbon Fiber ịsa Head na Myọcha
Osote: New Technology seramiiki ịnweta handheld ịsa isi na nyo
esi ísì mmiri iyo
ịsa isi isi
ịsa mmiri mmiri
Vitamin C ịsa ahụ nyo
New tech High Pressure ẹdụk Hand Shower
Chrome gbanye / ngbanwu Gbanwee Isi mmiri ozuzo
High Pressure ịsa isi- Chrome plated